Kala shaki soo kala dhex galay Cumar Filish iyo guddoomiyeyasha degmooyinka | Keydmedia
Kala shaki soo kala dhex galay Cumar Filish iyo guddoomiyeyasha degmooyinka
Kala shaki weyn ayaa soo kala dhex galay guddoomiya gobolka iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta degmooyinka, kaasoo la xiriiro xaalad amni, waxwax yaraaday howlihii shaqo ee ka socday caasimadda dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wada shaqeyn xumuo iyo iska warbaq la'aanta ayaa laga soo warinayaa xafiiska dowladda hoose ee Xamar kadib kala shaki soo kala dhex galay Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed 'Cumar Filish 'iyo qaar ka tirsan guddoomiyeyaasha degmooyinka.
Guddoomiyaha oo ka cabsi qabo mid la mid ah shirqoolkii lagu dilay Eng Yariisow ayaa yareeyay xaadiritaanka iyo kulamada lagu qabto gudaha xafiiska dowladda Hoose, waxaana sidoo kale la adkeeyay gelitaanka xarunta, iyadoona taasi ay saameeyn ku yeelatay howlihii shaqo ee ka socday gudaha xafiiska.
Qaar ka tirsan guddoomiyeyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa qaati ka taagan la kulanka Cumar Filish, iyadoona taasi ay sii xoojisay shakiga la kala qabo, waxaana la sheegayaa in Cumar Filish uu xogheyntiisa amar ku siiyay in aan cidna laga soo gudbin albaabka.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in guddoomiya gobolka Banaadir aanu si joogta u xaadirin xafiiskiisa tan iyo shantii bilood ee la soo dhaafay, waxaana sidoo kale dhawaanahaan aanan la qaban shirkii amniga gobolka oo inta badan ka dhici jiray hoolka xarunta dowladda hoose.
Cumar Filish ayaa is bedel cusub ku sameeyay nidaamka iyo shaqaalaha gobolka Banaadir tan iyo markii uu xilka la wareegay, waxaana shaqaalaha shuruud looga dhigay in keenaan qof magac leh oo damiin ka noqo karo sida xildhibaan iyo Wasiir.
24 bishii Julay ee sanadkii la soo dhaafay ayay aheyd markii haweeney araga naafo ka aheyd oo ka tirsan shaqaalaha gobolka qarax ka geysatay gudaha xarunta, waxaana muuqato in Cumar Filish weli aanu kalsooni ku qabin shaqaalaha qaarkood oo laga yaabo in ay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.